Orylọ ọrụ mmepụta ihe - Ọkpụkpụ ngwa ngwa (Engineering) Co., Ltd.
Otito scaffolding emewo ngwa ngwa akpaka, nke nwere ike inye nsị a haziri ahazi iji gboo mkpa dị iche iche nwere ahụmịhe afọ.
Ngwa ngwa ngwa ngwa nwere ike inye ihe nrụpụta ahaziri iche nke dabere na ahụmịhe afọ na ERP akpaka na ụdị njikwa dijitalụ.
Edere ngwa ngwa agafeela asambodo nchekwa nchekwa nchekwa, yana ezughị oke ISO9001: 2008 usoro dị mma, ISO14001 usoro njikwa gburugburu ebe obibi na OHSAS18001 sistemụ nchekwa nchekwa ahụike ọrụ. Ọ nweela ike mmepụta na ngwa ọrụ mmepụta zuru oke. Ngwá ọrụ ịgbado ọkụ zuru ezu na mpempe akwụkwọ mgbatị dị na robot na-ebuli ngwaahịa na imepụta ngwaahịa, usoro mmepụta dị elu na mma ngwaahịa.
Ọsọ scaffolding wuru emeri mmekorita ya na East South University wee banye ogologo oge nkwado nkwekọrịta; factory na-arụkọ ọrụ na Shanghai Jiao Tong University, na-aghọta akpaka mmepụta na ukwuu technology.
Scaffolding ngwa ngwa nwere ike ịnye nhọrọ ezubere iche iji gboo mkpa dịgasị iche iche nke ụlọ ọrụ dị iche iche.
Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa nke EN kwadoro 12811-1: 2003 ọkọlọtọ, na OA, SGS, ANSI10.8, AS / NZS 1576.3 asambodo, anyi bu onye otu SAIA. Otutu Scaffolding amalite ụdị dị iche iche nke formwork na scaffolding sample nhazi, imewe na mmepụta gburugburu ụwa.
Rapid Scaffolding nwere onwe mmepụta ikike, na-eduga akpaghị aka mmepụta edoghi na elu mmepụta ikike nke nwere ike izute a ọnụ ọgụgụ nke oru ngo wuru ina.